Tag: inona ny mpizara doka
Alahady 7 Janoary 2018 Sabotsy, Janoary 6, 2018 Douglas Karr
Fotoana famakiana: 2 minitra Mety ho toy ny fanontaniana tsotra any an-tsekoly, "Ahoana ny fomba anaovana doka amin'ny tranokala?" Sarotra ihany ny fizotrany ary mitranga ao anatin'ny fotoana fohy. Misy mpitory erak'izao tontolo izao manome ny mpihaino marobe kendren'ny dokam-barotra. Avy eo, misy ny fifanakalozana doka manerana izao tontolo izao, na izany aza, izay ahafahan'ny mpanao dokambarotra mikendry, manolotra ary mametraka doka. Ny atao hoe mpizara Ad Server Ad dia ireo rafitra